Davos aga Bürgenstock: World Economic Forum Style
Location: Mbido » Ịdee » Akụkọ dị iche iche » Davos aga Bürgenstock: World Economic Forum Style
Nzukọ World Economic Forum na-aga Bürgenstock
Ọ ghọrọ nnukwu ihe ijuanya nye onye ọ bụla nọ na Davos - Nzukọ World Economic Forum (WEF). Ee, WEF 2021 ga-anabata ya na Bürgenstock, 500 mita n'elu Lake Lucerne na Switzerland. A gwara ndị ụlọ nkwari akụ ahụ na akwụkwọ ozi banyere ihe omume a na-abịanụ zuru ụwa ọnụ.
N'ihe dị ka izu 2 gara aga, a mara ọkwa na World Economic Forum, nke na-emekarị na Davos na Jenụwarị (maka afọ 50), ga-agbanwe ọnọdụ ya na oge ya n'afọ ọzọ. Na mgbakwunye na Bürgenstock, Switzerland Ticino tụlerekwara dị ka ebe ọzọ.
N’izu gara aga, ndị na-ahazi nzukọ World Economic Forum kwupụtara na a ga-eme Nzukọ Ọgbakọ Mba Nile nke 2021 na Bürgenstock site na Mee 18-21, 2021
Na nkwupụta ya na-ekwupụta atụmatụ a ga-aga na Lake Lucerne, WEF Forum kwenyere na ejighị n'aka na-aga n'ihu na ma COVID-19 ga-agbadata nke ọma maka mkparịta ụka ọ ga-eme na "Nnukwu Ntugharị."
"Nzukọ a ga-eme ma ọ bụrụhaala na ọnọdụ niile dị iji mee ka ahụike na nchekwa nke ndị sonyere na ndị ọbịa ọbịa."
Nzukọ a ka na-ezube ijide naanị “Davos Dialogues” dijitalụ na Jenụwarị, nke ndị ndu ụwa niile ga - enwe ike "ịkekọrịta echiche ha banyere ọnọdụ ụwa na 2021." O kwukwara na na Wednesde nwere olile anya ịlaghachi ugwu Switzerland maka nzukọ kwa afọ nke 2022.
Ndị Switzerland Air Force bụ ọrụ maka nyocha na ịchekwa ọdụ ikuku, bụ nke ndị helikopta Super Puma, F / A-18 jets, ọdụ radar mobile, na kamera infrared. A na-ejikwa "ihe na-asọ oyi" Maka nha nchekwa, ndị agha Switzerland na Ngalaba Ndị Uwe Ojii Switzerland na-etinye ọkwa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị agha 10,000 na ndị uwe ojii.
Site na ego nke onyunyo onyunyo na nchedo oru gburugburu elekere maka ubochi iri nke ihe dika 10 nde Switzerland franc, gbakwunyere ugwo nche nke 32 nde Switzerland franc, ego nchebe maka WEF na ndi otu jikotara aka na enye ha. , na obodo, na WEF.
Mana Davos ga-eweta ọtụtụ nde ego ha nwetara ka WEF depụtara na akụkọ ihe mere eme na akụnụba obodo ha. Dabere na nyocha nke Mahadum St. Gallen, WEF wepụtara ahịa nke 94 nde Switzerland franc na Switzerland na 2017.
Na nzukọ kwa afọ nke 2018, ihe karịrị mmadụ 3,000 sitere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 110 sonyere na nzukọ 400. Ndi ozo tinyere ihe kariri ndi mmadu 340, tinyere ndi isi 70 na ndi ochichi tinyere ndi isi ulo oru 45 nke ulo oru na ndi otu, ndi nnochite anya mgbasa ozi 230, na ihe ruru ndi ndu 40.
Maka Lucerne na mpaghara dum nke Central Switzerland, WEF 2021 nwere ike iweta ezigbo nrụpụta na njem dị ka ọnụọgụ nke ọnụnọ ndị ọbịa si mba ọzọ gbadara site na 69 pasent na 2020. N'ihi mmachi njem, ndị ọbịa si esenidụt anọghị naanị ịnọ. si Switzerland ma ọtụtụ n'ime Europe kpamkpam.
Enweghi ndị njem ọzọ si Switzerland, USA, China na mba ndị ọzọ dị n'Eshia, nke pụtara na ndị ọbịa si mba ndị a erughị 90%.
Nke a dị iche na ndekọ ndekọ afọ 2019 mgbe ndị njem America na-achịkwa pasent 45 nke ndị mbata esenidụt.
Kaosinadị, Lucerne nwere ọmarịcha Centerlọ Ọrụ Congress dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke Lucerne. Cerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Omenala na Mgbakọ nke Lucerne (KKL) nke dị n'ihu Ọdọ Mmiri Lucerne bụ ebe zuru oke ma nye ohere maka usoro "ịchebe anya" ọhụrụ maka nzukọ.
Lucerne awade a mkpumkpu kpọmkwem ụgbọ okporo ígwè njikọ na Zurich ọdụ na dị nnọọ otu awa pụọ.
"Nzukọ WEF kwa afọ na Bürgenberg bụ ikike maka Bürgenstock Resort, canton nke Nidwalden, obodo Lucerne, na mpaghara nke Ọdọ Mmiri Lucerne dị ka ogbako pụrụ iche na ebe nzukọ. Ọ na-elekwasị anya na njem nlegharị anya na nke ọhụụ na mpaghara akụ na ụba. Anyị ga-enwe ekele maka ndị ọrụ gọọmentị niile na-eme ka enwee ike ịme ọgbakọ a nke aha mba ụwa kachasị elu n'okpuru ọnọdụ nchebe dị elu, "Robert P. Herr, Onye isi njikwa nke Bürgenstock Resort kwuru, mgbe ọ kwusịrị ụbọchị WEF maka afọ na-esote.
Bürgenstock Resort bụ nke Katara Hospitality, Qatar Holding LLC, nke ndị Qatar Investment Authority (QIA) hiwere.
Akara ngosi Switzerland a ma ama nke Bürgenstock hiwere na 1873, ebe otu Audrey Hepburn na Sophia Loren lụrụ di na nwunye, emezigharịla kpamkpam ihe karịrị nde US $ 700 (enwere ike karịa).
Chapel ebe Audrey Hepburn lụrụ Mel ferrer
Ebe ezumike dị na Bürgenberg enweghị ụgbọala zuru oke ma mejupụtara ụlọ 30. Ndị a gụnyere ụlọ nkwari akụ 4 sitere na ọkọlọtọ ruo 3-5 kpakpando kachasị elu ma na-enye ngụkọta nke ụlọ 383 na oke ime ụlọ, yana n'ezie, yana ebe nzukọ nzukọ.
Site na nlezianya na nchekwube na ndị nnọchite 500 ga-aga nzukọ 2021, WEF na-echeworị maka "ịtọgharị" nke ndị nnọchi anya 1,500.
Ma, n'ezie, Davos ga-alaghachi na Davos na 2022. Ma onye maara?
E guzobere WEF na 1971 site n'aka Klaus Schwab, onye prọfesọ azụmahịa na Mahadum Geneva.
Nke mbụ akpọrọ European Management Forum, ọ gbanwere aha ya na World Economic Forum na 1987 wee chọọ ịgbasawanye ọhụụ ya ịgụnye ịnye usoro maka idozi esemokwu mba ụwa. WEF na-eme ncheta afọ iri ise nke afọ a - hapụ ọtụtụ esemokwu edozi.
Ihe ikikere a, gụnyere foto © Elisabeth Lang (belụsọ na edeghị ya), enweghị ike iji ya na-enweghị ikike edere site n'aka onye edemede yana site na eTN.
Covid-19 Government Investment Management Qatar Resort Switzerland Akuko Economic World
Japan - Hawaii, na Hawaii - Japan egosipụta egosipụta
WestJet kwụsịrị ọrụ obodo anọ dị na Atlantic Canada
Nyocha omimi miri emi nke Ahịa Electromyography...
Heathrow: Enweghị amụma ka bụ eziokwu siri ike
FDA kwadoro ọgwụgwọ COVID-19 mbụ maka ndị ntorobịa…
Nchọpụta ọhụrụ na-egosi hydration nke elu ụzọ ikuku na-ebelata ...
Ngwa abụọ Wheeler Aftermarket & Consumable...
Kwa ụbọchị 100 nke mkpọsa mkpọsa maka 2022